Yurub qaarad ahaan waa mid aad u kala duwan, Europe waxay bixisaa wax nooc kasta oo ka mid ah socotada - qaniinyada delicious ka mid ah. Laakiin halka ay ku hari dhadhan loo farxay doonaa ugu? Cunto noocee ah ayaa cuni doonta aad Instagram xirtey ilaa 100 ee kooxaha? Jooji yaabban iyo bilaabaan munching. La kulmaan Goobaha Cuntada Best Europe ee la Siiyay Goolhaye our top!
Haddii aad raadineyso weeyna wax macaan, ma waxaad noqon doontaa gaaban doorasho ee cheese. Waxay macno yihiin rukunka jid kasta. Waxaan jecel nahay? A waffle sharoobada ka kooban yahay laba vafler khafiif ah, si qoto-dheer loo shiilay oo leh wanaag gooey oo gudaha ah laguna buuxiyey sonkor budo ah.
Sida aynu xitaa dooran karin magaca Cunnada ugu Fiican Places Yurub oo aan ka mid ah Italy! Ma jirtaa wadan Yurub cunto dheeraad ah mid taariikhi ah? Hello, carbs! Pizza iyo baastada ayaa ku jira liiska qof walba! Kaliya xusuusnow in gobol kasta leeyahay takhasuskiisa oo xilli ku tiirsan yahay.
Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah Best Cuntada Places Yurub laakiin waxa aanu iman digniin la'aan ah ma: "Entrée" waxaa loo isticmaali karaa qaybaha kale ee adduunka si loola jeedo "saxanka ugu weyn,"Laakiin Faransiis, waxa run ahaantii ka dhigan tahay "qaybhoreed."Sidaas daraaddeed soo shirtagi doono" entrée "for qaybhoreed iyo" abaalkaaga "for saxan ugu weyn, oo waxaad soo bixi doonaa dhinaca kale la caloosha buuxda iyo waayo-aragnimo weyn.
goobta cuntada London ayaa weli waa qayb ka mid ah Meelaha Cuntada Best Europe ayaa ilaa aan ogaado natiijada Brexit ah. London goobta waa mish-Mash aragtida, Kuliyadda dhaqameed iyo hal-abuurka casriga ah. Ma jiro safar cunno udub-dhexaad u ah London oo dhammaystiran ugu yaraan hal galab oo shaah ah, dubay Sunday a at baar xaafadda Ulasocto pint ah bitters ama qaar ka mid ah qaadato kalluunka iyo chips mid ka mid ah magaalada 'chippies badan.’ Haddii jikooyinka Michelinguiden ka-dhex muuqday badan yihiin wax aad, markaas waxaad weli tahay meel sax ah. Hadda waxaa UK ka jira shan makhaayadood oo haysta saddex xiddigood oo Michelin ah. Wabiga Inn The, Alain Ducasse at Dorchester ah, Araki The, Restaurant Gordon Ramsay, iyo The Duck Fat.
Tareenka Safarka Belgium, Tareen safarka Shiinaha, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Boortaqiiska, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tilmaamaha Tareenka Safarka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe